Microsoft waxay ku dhawaatay inay noqoto koox bir ah astaanteeda darteed. Abuurista khadka tooska ah
Ayaa sheegi lahaa Microsoft-ga qadiimiga ah ee awooda ku leh bilowgeeda, mid ka mid ah astaamaheedaWaxay umuuqatay sida dhagaxa weyn marka loo eego shirkad heegan u ah teknoolojiyadda cusub; badiyaa ahaanshaha tii bedeshay muuqaalka PC-yada ilaa maanta.
Oo waxaa jira astaan ​​kara u gudub mid ka mid ah Megadeath ama muusikada culus ee muusigga oo dib u soo laabanaya 80. Waxaa xiiso leh sida luqadda naqshadeynta ay isu beddeshay iyo sida isla shirkaddu ay wax uga beddeleyso astaanteeda si ay dhinac uga dhigto qaababkaas qallooca iyo aadka u dheer ee aan ka heli karno M, R iyo la F.
Waxay ku soo noqotay 1980 markii Microsoft qaaday tallaabo horay loo qaaday oo leh astaan ​​naqshadeyn ah taasi taariikhda ayey gali doontaa, maadaama ay umuuqatay koox bir ah marka loo eego shirkad u heellan horumarinta software-ka.
Qaababka iyo xarfaha xarfaha leh ee xaglaha xiran waa kuwo xiiso leh iyo in aysan xitaa u muuqan Microsoft lafteeda. Laakiin taasi waa taas haddii aan aadno 1975Waxay u muuqataa inay u eg tahay inaan muusigga ku raaceyno muusikadaas xiisaha badan ee ku guuleysatay tobanka sano.
Haa, waxyaabo horeyba maskaxdooda ayey u beddeleen markaan tagno 1982 iyo isha eeg eegmo culus oo la socda shaqalkaas dhexe taas ayaa ku soo socota waxa ay noqon lahayd shirkad tiknoolajiyad ah. Sannadkii 1987-kii waxaynu ku sii dhowaanaynaa xusuustaas muuqaalka ah iyo inaannu si dhow ugu xidhnay waxa ay shirkaddan u heellan tahay nidaamkeeda hawl-galku ay ahayd, inkasta oo markii dambe ay ku sii dhowaanaysay qaybaha kale sida madaddaalada.
Dad badani ma oga tan, laakiin Microsoft waxay ahayd koox bir ah 1980 - 1982. pic.twitter.com/8sP3dv2lU8
- Ian Bogost (@ibogost) November 19, 2019
Una isbeddelka astaanta in ka badan xiisaha taasna lama barbar dhigi karo kuwa kale sida Apple oo midabkiisu ahaa waxa ka soo muuqday. Halkaas ayey ku sii jiri doontaa daraasadda iyo mustaqbalka shirkaddan oo ka mid ah shirkadaha waaweyn ee hadda shaqeeya.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Dhiirrigelinta » Markii ay astaanta Microsoft ahayd ta kooxa birta ah
Farshaxanka fikradda, buug kor loogu qaado hal-abuurkaaga.